प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा शेयर नगर्नुहोस् यस्ता कुरा - S Khabar
प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा शेयर नगर्नुहोस् यस्ता कुरा
प्रेम सम्बन्ध जुनसुकै व्यक्तिका लागि उसको व्यक्तिगत विषय हो । त्यसलाई व्यक्तिगत तहमै राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर, सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो जीवन सामाजिक सञ्जालको एउटा अंग जस्तै बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आफैंमा नराम्रो हैन । तर, व्यक्तिगत जीवनको सबै पाटो यसमा खुलस्त पार्नु भने त्यति उचित हैन ।
जस्तो कि प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीहरुले आफ्ना सबै विषय सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पार्दा उनीहरुले धेरै समस्या भोग्ने गरेका विषय समाचारमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।
यदि तपाईं पनि प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा केही सावधानी अपनाउनै पर्छ ।
प्रेम सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा निम्नानुसारका सावधानी अपनाउन हितकर हुन्छ ।
–व्यक्तिगत फोटो : तपाईं र तपाईंको पार्टनरबीच खिचिएको व्यक्तिगत फोटोहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर नगर्नुहोस्, केही व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग पनि गर्न सक्छन् । जसबाट तपाईंलाई समस्या पुग्न सक्छ ।
– झै–झगडा : सामाजिक सञ्जालमा झै–झगडा भएको जनाउने तथा हिंसात्मक सन्देश दिनेखालका पोस्टहरु शेयर गर्दा त्यसले तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा असर पार्न सक्छ । सम्बन्धमा रहँदा सामान्य वादविवाद वा झगडा सामान्य कुरा हो । तर त्यो कुरा आन्तरिक रुपमा मिलाउनुहोस्, झुक्किएर पनि झगडा भएको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्नुहोस् ।
– महंगो उपहार : तपाईले आफूसँग समबन्धमा रहेको व्यक्तिलाई कुनै महंगो उपहार दिनुभएको छ या तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई महंगो उपचार दिनुभएको छ भने त्यसलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्नुहोस् । त्यसले अरुको नजरमा नराम्रो बनाउन सक्छ ।
– घुम्न जाने ठाउँको लोकेसन : यदि तपाईं पार्टनरसँग कतै घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्नुहोस् । कसैले गलत नियत राखेर तपाईंमाथि निगरानी गरिरहेको छ भने यसले थप असर गर्न सक्छ ।
– ब्रेकअप : यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनरबीचको सम्बन्धमा कुनै बाधा उत्पन्न भयो र सम्बन्ध टुट्यो भने पनि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्नुहोस् । यस्ता विषयले तपाईंको भविष्यमा समेत असर पार्न सक्छ ।
मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठका सुन्दर तस्वीर (फोटो फिचर)
मृ:त महिलाको पाठेघरबाट कसरी बच्चाको जन्म भयो ?